We Fight We Win. -- " More than Media ": ကချင်ဒေသ အခြေအနေ (၁)
ကချင်ဒေသ အခြေအနေ (၁)
MADI YANG HTE HKA YA LAPRAN NA GASAT POI ( 16-17/7/2011) from nawngnawng on Vimeo.
လက်တဆုတ်စာမိသားစုတွေကောင်းစားဖို့ကို မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေ စည်းစိမ်တွေပေးဆပ်လိုက်ရ တာမတန်ပါလား။ ဘယ်ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေက ရှိနေဦးမှာပါလား။ လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားထားနိုင်ပါစေ။
12 January 2012 at 01:32